YIWU COSMETICS MARKET ISINGENISO
I-Yiwu Cosmetics Wholesale Market iyisikhungo esikhulu kunazo zonke sase-China sokusabalalisa izimonyo namathuluzi okwenza izimonyo
Ikheli: Imakethe yezimonyo isezingeni lesi-3, Isifunda 3, idolobha lokuhwebelana lamazwe ngamazwe lase-Yiwu
Amahora ebhizinisi: 8:30-17:30 (isikhathi sasehlobo), 8:30-17:00 (isikhathi sasebusika).
Umkhiqizo:Imikhiqizo eyinhloko yizimonyo, imikhiqizo yokunakekelwa kwesikhumba, okokuhlanza, njll.
Imakethe yezimonyo ethengisa izinto eziningi inamadokodo ebhizinisi lezimonyo angaphezu kuka-1,100 endaweni yebhizinisi, kanye nezinkampani zamabhizinisi ezimonyo ezingaba ngu-1,200.Amabhizinisi akhiqiza izimonyo i-Yiwu enza u-30% wamabhizinisi okukhiqiza esifundazweni, futhi iyisizinda esikhulu kunazo zonke sokuthekelisa izimonyo esiFundazweni saseZhejiang.
Imboni yezimonyo ye-Yiwu isineminyaka engaphezu kwengama-30 ithuthuka.Abathengisi emakethe banamamodeli ebhizinisi afana nokuthengisa okuqondile kwasefekthri nokuthengiswa kwe-ejensi.Abahlinzeki esibambisene nabo bangabathengi abaqondile basembonini, abanezinzuzo ezisobala emikhiqizweni nasezintengo (ama-oda amasampula ayadingeka).
IZIPHUMA ZEMAKHATHI YEYIWU COSMETICS
Abakhiqizi bezimonyo be-Yiwu ngokuyisisekelo banezinhlobo zabo, futhi iningi labalingani babo bokubambisana kwezohwebo lwangaphandle bangabanikazi bomkhiqizo bangaphandle noma abakhiqizi be-OEM.Izindawo ezihamba phambili zokuthekelisa yi-Asia, Middle East, South America, Europe kanye ne-United States.
Imakethe ye-Yiwu ithengisa izimonyo zamanani nezitayela ezahlukene, Nansi imikhiqizo yezimonyo eshibhile, kungakhathaliseki ukuthi uvelaphi noma iyiphi intengo yezimonyo oyidingayo, ingatholakala.
I-YIWU COSMETICS MARKET PRODUCTS
Izimonyo zihlukaniswe zibe: ithunzi lamehlo, i-blush, impushana ecindezelwe, i-perfume, i-nail polish, i-mascara, i-eyeliner nezinye izimonyo.Inani elincane le-oda nenani lomthengisi ngamunye lihlukile, ngakho-ke ukuqhathanisa okuningi kuyadingeka ukuze kuthengwe emakethe.I-GOODCAN ibisiza amakhasimende ukuthi athenge izinsiza emakethe ye-Yiwu iminyaka engu-19.Noma ngabe umthengisi wakho wezitolo, umthengisi noma isitolo se-inthanethi, singakusiza ukuthi uthole abahlinzeki abathembekile, ukulandelela ukukhiqizwa, futhi sikuthumele ezweni lakini.
Okunye ukuboniswa kwezimonyo ezidumile:
Ingabe usukulungele ukuthola ibhizinisi eChina?
Ngokungeziwe ekuthengeni kwesayithi e-Yiwu Trade City, singahlinzeka ngo-1688, ukuthengwa kwe-ejensi yokuthengisa yase-Alibaba.Njengesikhungo sokuthengwa kwempahla esiphrofeshinali e-China, siyaqhubeka nokwandisa amakhono ethu ebhizinisi ukuze sinikeze amasevisi angcono kumakhasimende emhlabeni wonke.